Online ငွေရှာဆိုဒ်မှ: ဘောလုံဝါသနာရှင်များအတွက်
********************************************************** လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ် မိတ်ဆွေ...
မိမိတို့ အားလပ်သော တစ်နေ့တာ အချိန်ကို Onlin မှာ Paid to click ကြောညာ Clicl ခြင်းဖြစ်လည်ကောင်း၊ ဂိမ်းဆော့ခြင်းဖြစ်လည်ကောင်း၊ Satoshi (or) Bitcoin စုဆောင်းခြင်းများဖြင့် ပိုက်ဆံရှာပါ. PTC ဆိုဒ်များကို Scam လွတ်ပြီ အခက်ခဲကင်စွာ ငွေရှာရလွယ်အောင် Skill များ ပြောပြပေးပါသည်..Sites များမှ ရရှိလာသော USD$ များကို ငွေသွင်း ငွေထုတ် ယူရန် Prefect money , Payeer onlin banking အကောက်များဖွင့်ခြင်း ၊ USD$ မှန်ကန်သော ဈေးနှုန်းနဲ့ လျင်မြန်သော ၀န်ဆောင်မှုများပေးပါသည်... ဆက်သွယ်ရန်moenyamaung93@gmail.com suntunlin..phone.01611272.610083..09420308096....။ ဘလော့မှာ တင်ပြထားသည် PTC Sites များသည် ကျတော် ကိုယ်တိုင် Scam စစ်နည်း သုံးလေးမျီုးဖြစ် စစ်ထားသည် 80% အထက် ယုံကြည့် စိတ်ချရတဲ့ Sits လေးတွေပါ..ကျတော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဒီဆိုဒ်တွေမှာ ၀င်ငွေရှာဖွေနေလျှက်ရှိပါသည်..။
Sat 29/09/12 Arsenal 18 : 15 Chelsea More info
Everton 20 : 30 Southampton More info
Fulham 20 : 30 Manchester City More info
Norwich City 20 : 30 Liverpool More info
Reading 20 : 30 Newcastle United More info
Stoke City 20 : 30 Swansea City More info
Sunderland 20 : 30 Wigan Athletic More info
Manchester United 23 : 00 Tottenham Hotspur More info
Sun 30/09/12 Aston Villa 21 : 30 West Bromwich … More info
Tue 02/10/12 Queens Park Ra… 01 : 30 West Ham United More info
1 Chelsea54 1092+7 13 W D W W W
2 Manchester United5401 126+6 12 W W W W L
3 Everton53 1 195 +4 10 W D L W W
4 West Bromwich …53 1 174 +3 10 W L W D W
5 Arsenal523092 +79D W W D D
6 Fulham5302 127+59W W L L W
7 Manchester City5230 107+39D D W D W
8 Tottenham Hotspur5221 86+2 8 W W D D L
9 West Ham United522154 +1 8 D D W L W
10 Newcastle United522166 +0 8 W D D L W
11 Swansea City52 12107+37L L D W W
12 Sunderland404044 +04D D D D
13 Stoke City504145 -14L D D D D
14 Aston Villa51 1359-44L W D L L
15 Wigan Athletic51 135 10 -54L L D W L
16 Southampton5104915 -63W L L L L
17 Norwich City503228 -63L D D D L
18 Liverpool5023410 -62L D L D L
19 Queens Park Ra…5023311 -82L D L D L
20 Reading40 1349-5 1 L L L D
R. van Persie Manchester United51 2
D. Ba Newcastle United40 3
J. Defoe Tottenham Hotspur40 3
S. Fletcher Sunderland40 3
R. Lambert Southampton41 3
Michu Swansea City40 1
D. Duff Fulham30 2
M. Fellaini Everton30 1
K. Nolan West Ham United30 3
C. Tévez Manchester City30 1
B. Zamora Queens Park Rangers30 3
V. Anichebe Everton20 1
H. Ben Arfa Newcastle United21 1
D. Berbatov Fulham21 1
P. Crouch Stoke City20 1
Lloris is not frustrated - AVB
Jenas to make Forest loan move
McDermott hopes Pardew is welcomed
OLBG.com Exclusive Free Bets
Claim the best free bets on the web at OLBG
Claim 2500 EUR/GBP In Free Bets
Free Bets From Over 30 Bookmakers and Casinos. Many Exclusives. Click here to visit betrescue.com
Click here to get free soccer tips from the experts
Free Betting Offers - September 2012
ValuePunter.com providesatop list of available free bets from some of the most reliable bookmakers online.
Free Bonus News
Sign-Up-Bonus.net is the best resource for bonus news and details from all
Latest news and odds for all major football competitions & matches, together with opinions and tips from Steve Claridge
ProTipster - Winners United!
BUY or SELL sportsbetting picks, infos and live reports at ProTipster. Join now for Free!
1 Chelsea5+7 13
2 Manchester United5+6 12
3 Everton5+4 10
4 West Bromwich …5+3 10
5 Arsenal5+7 9
ရေးသားသူ ဆန်းထွန်းလင်း အချိန် 21:25
မိတ်ဆွေတို့ စကားသံက ကျတော်အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။
ကျတော် ဘလော့လေးကို ဝေဖန်ပေးကြပါနော်
အုတ်ခဲတစ်လုံးကနေ့ ကြီးမားတဲ့ တံတိုင်းကြီးဖြစ်သွားသလို့၊ တစ်နေ့တစ်လှမ်း ၊ ပုဂံဘယ်ပြေးမလည်ဆိုသလို သဲတစ်ပွင်ကနေ ကျောက်တုန်းကြီး တစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်သလို ၊ ရေတစ်စက်နေရင်လည်း မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ဖြစ်စေပါတယ် ဒါကြောက်ဘယ်အရာမဆိုတစ်လှမ်းချင်းလှမ်းစေချင်ပါတယ်..
BITCOINS စုဆောင်းရန် လွယ်အိပ်ယူရန် ပုံကို Clickyg
'Bitcoin Site များကြည့်ရန်<!- change the links with your own -> faucet.9bitz.eu moonbit.co.in bitcoinker www.pinktussy.com www.rabbitcoin.biz www.mezzabank.com faucet.bitcoinzebra.com www.umbrellafaucet.com fairyfaucet.com www.mezzabank.com faucet.9bitz.eu coincheckin.com spinandw.in bitganancias.com yourfreebtc.com faucet.bosshippie.com btctap.bissnes.net megabitload.com thebitcoinsheep.com yourfreebtc.com www.luckycoin.me www.999dice.com btc25.net btc25.net
Online Banking acc ဖွင့်ရန် အောက်မှရှိသောပုံများကို Click ပါ
ဒီနေရာမှာ ဆွေနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
မင်္ဂလာပါ ခဗျာ PTC (or) Paid To Click မှာ ပိုက်ဆံရှာချင်သူ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအတွက် စိတ်ချရသော PTC များကို စုဆောင်းထာပါသည်..။ အားပေးမှုကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ခင်ဗျာ...။ အဆင်မပြေတာ ရှိရင် အောက်က C-Box မှာ အော်ခဲ့ပေးပါ ခင်ဗျာ..။
ယနေ့ ကြွလာ မိတ်သဟာ
Android နည်းပညာများ (13) MTVသီချင်းများ (1) prefect money အကောက်ဖွင့်နည်း (1) Titanicဇတ်ကြောင်း သ်ိချင်သူများ အတွက် (1) ကဗျာ (28) ကွန်ပျူတာ အခြေခံ ပြုပြင်နည်း (5) ဂိမ်း (5) စားကြမယ်ဟေ. ကောင်းကောင်း (11) ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ (1) တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် (1) ဓတ်ပုံ (16) နည်းပညာ (22) နီကိုရဲ ၏ စာအုပ်များ (1) ပုညခင်၏စာပေများ (1) ဖလပ်ဆောင်များ (1) ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်း၏စာပေများ (1) ဘာသာပြန်စာအုပ် (3) မင်းခိုင်စိုးစံစားပေးများ (1) မင်းသိင်္ခ၏စာအုပ်များစာစည်းမှု (2) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမစာစုများ (1) ရသ (8) ရုပ်သံ ဗီဒီယို တည်းဖြတ်တာ ရေးနည်းလမ်း (1) သတင် (1) သတင်း (10) သတိုးတေဇ စာအုပ်များ (1) သီချင်းများဒေါာင်းရန် (6) သုတ (13) ဟာသ (5) အင်တာဗျူး အစီစဉ် (5) အွန်းလိုင်းငွေရှာနည်း (BTC) (1) အွန်းလိုင်းငွေရှာနည်း (PTC) (3) အာကစားကဏ္ဍ (1) ဆောဝဲ (21) ဆောင်းပါး (32) ဆောင်းပါးး (11) ဗေဒင်ဟောစတမ်း (3) သော်တာဆွေရဲ့ စာပေရသများစုစည်းမှု (1)
HTML Colour Coads
ပို့စ်နောက်ခံကာလာနဲ့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင် တင်နည်း...
လောကမှာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် လူတိုင်း လူတိုင်းဟာေ...
အခန်းကျင်းလေးက ပေးတယ် သင်ခန်းစာ
" အများသုံး WiFi များတွင် Facebook သုံးသူများ Acco...
------- အမြဲတမ်းပဲပြုံးမယ့်သူ -------
ကလေးငယ်များအား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှု ဖြစ်ပွား.
Phone Ringtones လေးတွေဒေါင်းမယ်
““ ကြီးတော်နဲ့ ပြောချင်လို့ အုတ်လိုင်းတက်မယ် ”
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးတည်းသော ““သူရဘွဲ့ရရှိသူ အမျို...
အလှမွေးငါကန်လှလှလေ(10)ခု ကြည်.ကြည်.နော် အရမ်း လှတာ...
ဆော်ရီး မှားသွားလို့"ဟယ်လို...မိန်းမလား" "ရှင်......
ချစ်သူမိန်းကလေး လိုက်နာရမည့် ရည်းစားကျင့်ဝတ် (၆) ခ...
မိမိကွန်ပြူတာ ပိုမို မြန်ဆန်အောင်လုပ်ကြည်ကြရအောင်
ပျောက်ဆုံးသွားတယ် CD၊DVDမှာ DATအချက်လက်များ ပြန်လည...
သိပ်ချစ်ရတယ် မ အတွက်
ဒီလို စိတ်ထားမျိုးလေးက အမိုက်ဆုံးးး
အရမ်းသနားဖို.ကောင်တယ် (အရူးဇတ်လမ်းလေးပါ )
ချစ်သူများနေမှာ ဒါတွေ မကြားချင်ဘူးးး
ချစ်သူ ရည်စားကိုမပြာသင်.တယ် စကား(10)ခွန်း
VZO ချက်ချင်တယ် ကောင်မလေးတွေ သတိထားစေဖို.
မွေးနေ၊ မွေးရက်နဲ သူတိုရဲ ဂုဏ်သတ္တိတွေပါ
ဒီမှာရွေးမယ်<!- change the links with your own -> စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် လူမင်း နန်းစုရတီစိုး န၀ရက် တင်မိုးလွင် လွင်မိုး
'ဒီမှာရွေးပါ<!- change the links with your own -> အောင်အောင်(မကစ) မောင်(စွယ်စုံကြမ်း) မြန်မာချစ်သူ ဖူစာရှင်လေး အရူးလွယ်အိပ်
သုတ ရသ စာအုပ်များလိုချင်ရင်
ဒီမှားရွေးမယ်<!- change the links with your own -> ၀ိညာဉ်သစ်သုတရသစာအုပ်မျိုးစုံ စကားဝါမြေ အွန်လိုင်းစာကြည်တိုက် အဆိုတော်တို၏သီချင်းစာအုပ်အစုံ လွန်းထားထား ဆေးတက္ကသိုလ် မှော်ဝင်မြို စာကြည်တိုက် ရွှေစကား စာကြည်တိုက်
BTC & BTC Sites ဂိမ်းဆော့ရင်နဲ့ ပိုက်ဆံရှာမယ်
မေးချင်တာမေးပါ သိတာပဲ ဖြေပေးပါမယ်
ကျောက်မီးသွေတွင်းတူးတာလေးပါ အရမ်းပဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်သလို ပိုက်ဆံလည်းရပါတယ်
bitcoin ရင်ပြီး ဆော့လိုရပါတယ် ဆိုဒ်ကောင်းလေး တစ်ခုပါ
Here is some sample html you can use in forum signatures to promote your personal referral link: 999dice.com | 99.9% Dice Payout | Earn BTC with 50/50 Referral Program | Play & Chat
ဂိမ်းဝါသနာပါတယ် သူငယ်ချင်းများအတွက် ပိုက်ဆံရတဲ့ ဂိမ်းဆိုဒ်များကို စုစည်းထားပါတယ်
♥ ဝါသနာအရ စာပေများနဲ့ နည်းပညာလေးတွေ လေ့လာနေဆဲပါ။ ကျွန်တော်သိတာတွေလည်း ပြန်လည် မျှဝေနေတုန်းပါပဲ။ တစ်ချိူ့သော ပိုဒ်တွေက ကျတော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်လို ပြန်လန်ကူးယူဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ် ♪ တစ်ခုခု အကူညီလိုချင်တယ် ပြောချင်တယ် ၊ မေးချင် ၊ သိချင် ၊ ခင်မင်ချင်တယ် အကြံပေးချင်တယ် ဆက်သွယ်မယ် ဆိုရင် ♥ ♥ ♥ moenyamaung93@gmail.com ♥ chitthumaung93@gmail.com ♥ ♥ မှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ♪♪♪ ♥ -deathnote443@gmail.com - ။- ....
moenyamaung93@gmail.com. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.